Maroantsetra – AVG: mitohy hatramin’izao ny fanondranana andramena | NewsMada
Maroantsetra – AVG: mitohy hatramin’izao ny fanondranana andramena
Mitohy ihany, hatramin‘izao, ny raharaha maloto amin’ny fanondranana andramena. Manaitra ny tompon’andraikitra ny fiarahamonim-pirenena tarihin’ny Alliance Voahary Gasy (AVG) momba io sehon-javatra io any Maroantsetra.
Tato ho ato, tsikarikaritra indray ny fisian’ireo sambo mitatitra andramena avy any amin’iny avaratra atsinanan’ny Nosy iny. Manaitra ny mpitondra fanjakana ny Alliance Voahary Gasy sy ireo mpiara-dia aminy, saingy tsy hita izay fandraisana andraikitra, tafavoaka ihany ireo hazo sarobidy ireo. Noho izany, efa hatramin’ny ela no nitaky ny mangarahara ny AVG momba ireo andremana voatazona sy nanaovana fanambarana.
Raha ny tarehimarika farany nambaran’ny AVG, eo amin’ny 20.000 ny andramena voatazona ; 200.000 nanaovana fanambarana, ny taona 2012, amin’izao fotoana izao izany, tafakatra 270.000. Fanontaniana napetraky ny AVG : “ Misy marina ve ireo hazo ireo ary aiza ?” Koa mitaky ny mangarahara momba ireo hazo voatozana sy nanaovana fanambarana ireo ny AVG ary mangataka fiaraha-miasa amin’ny rehetra.
Toa midika fa misy fanomezan-dalana indray raha io tarehimarika farany nanaovana fanambarana io, nefa raha ny fandripahana ny ala eto amintsika, sarotra ny ahitana ny hadirin’ny andramena mitovy amin’ireo voatazona sy nanaovana fanambarana ireo, araka ny fanamarihan’ny Cites sy ny mpikaroka any amin’ny Oniversite.
Raha tsiahivina ny tatitra efa navoakan’ny AVG, ny volana janoary 2009, ny fitondran-dRavalomanana Marc, nanome alalana olona 13 hitrandraka andramena ; io taona io ihany, volana septambra, fitondrana tetezamita nitondran-dRajoelina Andry, nanampy fanomezan-dalana ho an’ny olona 31 hafa izy.
Resabe fotsiny izany ady amin’ny kolikoly izany eto. Fantatra, ohatra, ny fisian’ireo bolabolan’andramena miisa 30.000 tratra tany Singapour, ny taona 2014, mitentina 50 tapitrisa dolara. Afa-maina fotsiny ny olona voarohirohy tamin’izany noho ny hoe fisian’ny fanomezan-dalana nataon’ny minisitry ny Tontolo iainana tamin’izany, Ramparany Anthelme.